Ikamva eliqaqambileyo leNtengiso | Martech Zone
NgoLwesibini, Aprili 1, 2014 NgoLwesibini, Aprili 1, 2014 UKelsey Cox
Ngelixa uninzi lwamabala lubone ukuntywila kumathuba engqesho ngenkqubela phambili kwitekhnoloji, amathuba emisebenzi okuthengisa ngoku ayanyuka kwaye ajonge ukuba lukhetho olukhuselekileyo kwikamva. Umsebenzi omnye kwemine eUnited States ukwishishini lokuthengisa, kodwa eli shishini ligubungela okungaphezulu kokuthengisa nje. Ngapha koko, ngaphezulu kwe-40% yezikhundla kwindawo zentengiso yimisebenzi ngaphandle kwentengiso.
Imisebenzi ephezulu yokunyuka kwama-5 kwintengiso kukuhlalutya intengiso, ukuthengisa nge-imeyile, ukukhangela kwendalo, ukukhangela okuhlawulelweyo, kunye nemidiya yoluntu. Kuyacaca ukuba i-e-commerce ibalulekile kwimpumelelo kwintengiso kwaye notyalo-mali oluphezulu kulo nyaka luya kuba kukuhambahamba, ukulungiswa kwendawo, kunye nentengiso. Abanye abathengisi sele bephambi komdlalo ngobuchule obutsha bokunyuka ngaphezulu kwabanye. U-Kroger uneekhamera ezibonisa ubushushu bomzimba ukujonga ukuba zingaphi iindlela zokujonga ukuvula. Inkqubo yeWalmart itshintshela kwimowudi yokugcina ngaphakathi ukuze ukwazi ukufumana nantoni na oyifunayo ngokulula. Ngezinga lokukhula kwetekhnoloji kunye nokunyuka kwe-e-commerce, siza kubona utshintsho ngakumbi kumzi mveliso weentengiso kule minyaka mihlanu izayo kunokuba besinjalo kwi-5 edlulileyo. Ingcaciso wabelana ngeenkcukacha-manani zentengiso kunye nabasebenzi bayo, eziphi iinkampani ezingaphezulu komdlalo wabo, kunye notyalo-mali oluphezulu lwe-e-commerce ka-2014 kwi-infographic engezantsi.
Ikamva lentengiso kunye ne-e-commerce liqaqambile kwingqesho, ukuvelisa izinto ezintsha kunye notyalo mali.
tags: kwiaeropostalebaynoticarmaxeCommercekrogermacy'sindawo yokugcina amadodamzantsiwebnuggetukuthengisa onlineqtukumkaniIvenkilesephorainkwenkweziivenkile yesikhongozeliimidumbawalmartiigamaUkutya konkezappos